भारतलाई चेतावनी : लामो यु’द्धका लागि चीन पूर्णरुपमा तयार ! – Jagaran Nepal
भारतलाई चेतावनी : लामो यु’द्धका लागि चीन पूर्णरुपमा तयार !
काठमाडौं । लद्दाखको गालवन घाटीमा भएको भारत र चीनका सेनाबीचको भि डन्तमा २० भारतीय सेनाको निधन भएपछि चीन भारत सम्बन्ध पेचिलो बनेको छ । लामो समय देखि लद्दाकमा भारत र चीनका सेनाबीच त नाव कायम थियो । धेरै पटक झ डपका घटना भएका थिए । तर यति धेरै क्ष ती हुने गरी भएको झ डप भने पहिलो पटक हो । सो घटना पछि भारत र चीनका अधिकारीहरुले एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गरिरहेका छन् ।
घटना हुनुको कारण एक अर्कालाई देखाएका छन् । चीनका अधिकारीहरुले झ डप भारतीय सेनाकै कारण भएको दावी गरेको छ । चीनको मिडियामा सोही दावी सहितका समाचार प्रसारण भएका छन् । ग्लोबल टाइम्सले चीन र भारतको सीमामा लगातार तनावको कारण भारतीय सेनाको घ मन्ड र दु स्साहस भएको प्रतिकृया दिएको छ ।
सो घटना पछि भारतको यस्तै रवैया कायम रहे चीन लामो यु द्धका लागि पनि तयार रहेको चेतावनी भारतलाई दिएका छन् । सो घटनालाई लिएर भारत र चीनका मिडियाले प्राथमिकताका साथ आफ्ना दावी सहितका सामग्री प्रशारण गरिरहेका छन् । भारतलाइ चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले चीन यु द्धका लागि तयार रहेको र आफ्नो सेना कमजोर नभएको भन्दै चेतावनी दिएका छन् । यु द्धका लागि प्रयाप्त सेना रहेको दावी गरेका छन् ।
चिनियाँ मिडिया ग्लोबल टाइम्सले सम्पादकीयमा सीमा नजिक भारतीय सेनाले भौतिक निर्माण गरिरहेको र आफ्नो क्षेत्रमा समेत निर्माण कार्य गरेको दावी गरेको छ । समाचारा सोही कारणले त नाव भएको बताएको छ । भारतले चीनलाई हेपेर उसकै जमिनमा वाटो निर्माण गरेको आरोप गाएको छ । त्यसरी काम नगर्न चीनका सेना रोक्न जाँदा आ क्रमणमा उत्रिएको आरोप समाचारा लगाइएको छ ।
ग्लोबल टाइम्सले लेखेको छ, ‘पछिल्लो केही वर्षदेखि भारत आफ्ना छिमेकी मुलुकप्रति असहष्णिु तरिकाले अघि बढेको उल्लेख गरेको छ । उसले अमेरिकाको द वावका कारण भारतले चीन विरुद्ध यस्तो कदम चालेको हुन सक्ने आँकलन सम्पादकियमा गरिएको छ । सम्पादकीयमा चीनको सेना कुनै पनि पक्षवाट भारतीय सेना भन्दा कमजोर नभएको पनि बताइएको छ ।
केही व्यक्ति व्यक्तिहरुमा गलत बुझाइ रहेको छ कि भारतीय सेना चीनको सेनाभन्दा शक्तिशाली रहेको छ, सम्पादकियमा उल्लेख छ । सम्पादकीयमा आफुहरु त नाव कम गर्ने पक्षमा रहेको पनि बताइएको छ । दुवै सेनाका अफिसरहरु बीच भएको उच्चस्तरीय बैठकमा भएको आम सहमतिलाई पालना गर्ने कुरामा चीन विश्वस्त रहेको भन्दै स्थिति शान्त भयो भने दुवै पक्षलाई फाइदाजनक साबित हुने बताइएको छ । त्यसका लागि भने दुवै देशका सेनाले प्रयास गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
सीमा विवादलाई सुल्झाउने दौरान चीनले क्षेत्रीय अखण्डता र राष्ट्रिय हितलाई कायम राख्ने बताइएको छ । ‘चीनसँग आफ्नो जमिनको हरेक एक इन्चको सुरक्षा गर्ने ताकत र समझदारी रहेको छ र आफ्नो विरुद्ध कसैको पनि रणनीतिक चाललाई सफल हुन दिनेछैन,’ उसले भनेको छ ।